Ny ankamaroan'ny vao manomboka (ary na dia efa za-draharaha aza) dia mpanao fanatanjahan-tena mino fa fampiofanana matanjaka izay mampiroborobo ny hozatra mavitrika. Raha ny marina dia tsy marina tanteraka izany. Ny fanatanjahan-tena dia manamafy ny fivoarana fotsiny, ary ny fananganana hozatra kosa dia miseho mandritra ny fitsaharana.
Noho ny zava-misy atleta maro no tsy mahalala an'io fahamarinana tsotra io ary manao fanatanjahan-tena hanaovana akanjo, dia tsy tratrany ny vokatra andrasana. Izany no maha zava-dehibe ny fitsaharana.
Eo anelanelan'ny fanazaran-tena dia afaka mamandrika tapakila fiaramanidina ianao, mandeha amin'ny sarimihetsika na mandeha mitsangatsangana fotsiny, voalohany, miala sasatra, ary faharoa, mba hanomezana ny hozatra ny fivelarana.
Mba hahatratrarana ny fahombiazana farany avo indrindra dia mila manaraka ny fanazaran-tena mety amin'ny fampihetseham-batana sy fialan-tsasatra ianao. Noho izany, zava-dehibe ny fahalalana ny fotoana fitsaharana mandritra ny fiatoana eo anelanelan'ny fanazaran-tena. Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao amin'ny antsipiriany momba izany.
Fa maninona no mila fitsaharana ny hozatra?
Betsaka ny bodybuilder no mahalala ny toe-javatra misy, aorian'ny fampihetseham-batana mahery vaika amin'ny Alatsinainy, amin'ny Alarobia dia mbola tsy ampy ny tanjaka sy angovo amin'ny fampihetseham-batana. Aza heverina izany harerahana mahazatra izany.
Ny tena izy dia mba hahafahana manatanteraka hetsika rehetra, ny olona iray dia mila fari-pahaizana manokana momba ny loharanon-karena biokimika. Mandritra ny fampiofanana mavitrika dia mampiasa azy ireo ny bodybuilder. Indraindray ny vatana dia very tanteraka ny fahaizany mamerina.
Ny zavatra voalohany mitranga amin'ny vatana aorian'ny fampiofanana matanjaka dia ny fanangonana tahiry biokimika... Ity dingana ity dia tsy maharitra 15 minitra.
Ny fanarenana tanteraka ny vatana dia afaka maharitra telo andro ka hatramin'ny herinandro iray manontolo (arakaraka ny hamafin'ny fiofanana), ary aorian'ny famenoana ireo loharanon-karena biokimika vao manomboka ny fizotran'ny fitomboan'ny hozatra.
Maharitra hafiriana ny fitsaharana
Ny fanaraha-maso ny tsy fetezan'ny fampihetseham-batana dia tsy dia sarotra loatra, ary tsy maninona izay faritra amin'ny hozatry ny vatanao nozofinao: tratra; miverina; tongotra sns.
Alao an-tsaina ny toe-javatra aorian'ny fampiharana mahery vaika sy mahomby amin'ny Alatsinainy, amin'ny Alarobia dia miezaka mafy ianao manatanteraka ny fenitra mitovy amin'izany. Ity dia heverina ho hadisoana lehibe. Ho fanampin'ny zava-misy fa tsy azo tanterahina izao ny vokany dia atahorana hanimba ny fahasalamanao ianao.
Azo heverina fa amin'ny alakamisy ianao dia hahazo hery indray. Hatramin'ny maraina dia hahatsiaro ho velombelona ianao. Manoro hevitra anao izahay mba hiala amin'ity anio ity ihany koa.
Mandritra izany fotoana izany dia mety mila mijery ianao hoe aiza no amidy ny tapakilan'ny fiaramanidina hahafahanao mandeha am-pilaminana ny asanao isan'andro. Ny alakamisy, vao vita ny fizotran'ny vatana. Raha ny marina, ny vatan'olombelona dia mahavita bebe kokoa.
Amin'ny zoma, mety ho tsapanao fa misy angovo hafahafa hafahafa ary afaka manao fanazaran-tena sarotra noho ny teo aloha.
Ahoana ny fomba hahatongavana zaza salama ao an-trano - programa fanofanana
Fandaharana fampiofanana an-trano Dumbbell
Posted in fanatanjahan-tena
Prev Inona no hatao amin'ny offal
Manaraka Ahoana no hanafainganana ny metabolisma?